‛राजनीतिमा स्थायी मित्र भन्ने नहुने रहेछ, समयले कहाँ पुर्याउँछ कसलाई के थाहा’- गंगा ब. लामा «
‛राजनीतिमा स्थायी मित्र भन्ने नहुने रहेछ, समयले कहाँ पुर्याउँछ कसलाई के थाहा’- गंगा ब. लामा
प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७५, शनिबार ०७:३९
प्रस्तुति : एकराज रुम्दाली
‛गंगा बहादुर लामा’ नसुनिएको होइन् । तर धेरै भो, सुनिएको छैन । रक्तिम युद्धका मोर्चाहरुमा मुक्तिका नारा घन्काउँदै बस्ती उचाल्ने उनी आजकल सुनिदैनन् । सुनिन्छन् त केवल फेसबुकका भित्ताहरुमा । सिरिफ एक दृश्यका रुपमा । यी माथिका भनाई पनि त्यही भित्तामा भेटिएको । प्राय : उनी फेसबुकमा क्रान्तिको सम्झना गर्छन् । क्रान्तिका सपना विगार्दै हिड्नेलाई राम्रो मान्दैनन् । तर नराम्रो पनि भनिहाल्दैनन् । र त उनी लेख्छन्, ‛समयले कहाँ पुर्याउँछ, के थाहा ।’
उनी ख्याल गरेरै समयसँगै हिँडेको मान्छे । सवैको स्वप्न साँचेर हिँडेको, स्थायी मित्र बनाएर सँगै दगुरेको मान्छे । तर, आज उनी होसमा पनि सपना विहिन एक्लै घस्रिन्छन् । र निस्फिक्री बाँचिरहेछन् । हारेका छैनन्, अपांग भएर के–भो । हो, उनी अपांग छन् । वैशाखीको सहाराले सपांगको बहाना गरिरहेछन् । चोक अनि गल्लीहरुमा । उनी त्यही काठमाण्डौ ,कपनको मिलनचोक छेउछाउमा देखिन्छन् ।
जनयुद्धका एक सिपाही उनलाई पनि समयले कहाँ पुर्यायो ? एक ज्यूँदा शहिदमा दर्ज भएर बाँचेका छन् । अरु केही छैनन् । धेरै चिज गुमाएका छन् । अब, गुमाउन उनलाई केही रहेनन् । पाउनु पर्ने पनि त छैनन् । र त उनी मुक्ति र स्वतन्त्रताको विगुल फुक्दैनन् । हिजोका प्राण जस्ता साथीहरु आज दुस्मन–दुस्मन भएका हेर्छन् । दुस्मनहरु साथी बनेका अपत्यारिला तर वास्तविकता सिंचिएका दृश्यहरु हेर्दै बसिरहन उनलाई बानी परेको छ ।
यसो बसिबियालो गर्न या किन, दाइले हिजो भित्तामा तस्बिरहरु हालेछन् । त्यही जनयुद्धका याद दिलाउने जुझारु तस्बिरहरु । ति तस्बिरमा जस्ता अहिले को छन् र ? प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धमा भूमिगत भएर हिँडेका विप्लव अहिले प्रचण्डको सरकार हुँदा पनि भूमिगत नै छन् । सँगै फुलमाला लाएर प्रचण्डसँग कुम जोडेका ‛प्रकाण्ड’ काण्डै काण्डले जेलमा सरेका सरै छन् । ‛वादल’ थपडी बजाइरहेछन् । वैद्य चुरोट र केही प्याक टप्काउँदै कतै सैद्धान्तिक पाठ जप्दै छन् ।
आजभोली जे छन्, गंगा दाइ छन् । जहाँ छन्, दाइ राम्रै छन् । तर क्रान्ति कहाँ छ ? सपना कहाँ छ ? आखिर किन, दाई यस्तै सम्झनाका तस्बिरहरु पोष्ट गरेर मन अमिलो बनाइदिन्छन् ……?…..किन …………..?